News - Si diiran loogu dabaaldego mashruuca DTS Nestlé ee Turkiga ayaa si guul leh uga gudbay Imtixaankii Qaybinta Heerkulka Nestlé
Shandong Dingtaisheng Mashiinnada Teknolojiyada Co., Ltd., oo ah hoggaamiye ka ah warshadaha nadiifinta cuntada iyo cabitaanka sharaabka, wuxuu sameeyay horumar isdaba-joog ah iyo hal-abuurnimo xagga jidka loo socdo, wuxuuna ku guuleystay aqoonsi iyo kalsooni loo dhan yahay ee macaamiisha dal iyo dibad.
Waxaa xusid mudan in mashaariic badan in sanadkaan DTS ay ku guuleysatay mashruucii cabitaanka qaxwada ee shirkadda Nestlé Turkey OEM, oo siineysa qalab buuxa oo loogu talagalay soo celinta jeermiska jeermiska lagu nadiifiyo ee biyaha, iyo ku xirida mashiinka buuxinta ee GEA ee Talyaaniga iyo Krones-ka Jarmalka Muddadan, laga soo saaray wax soo saar iyo wax soo saar, illaa FAT, illaa rakibidda iyo hawlgelinta hal mar; "haysato awood lagu qanci karo", kooxda DTS shuruudaha adag ee tayada qalabka, xalalka adag ee farsamada xalka, waxay ku guuleysteen macaamilka ugu dambeeya, Mareykanka Mahadnaqa khubarada Nestlé iyo shaqaalaha shahaadada dhinac saddexaad ee Koofurta Ameerika Ka dib in ka badan toban maalmood oo wada shaqeyn ah iskaashiga, qaybinta kuleylka ee bakteeriyada DTS ee xaaladda taagan iyo wareegga ayaa si buuxda u qalma, oo si guul leh ugu gudbay xaqiijinta kuleylka adag ee Nestlé.
Waa maxay xaqiijinta kuleylka? Maxay tahay sababta xaqiijinta kuleylka ah ay si aad ah ugu qiimeeyaan macaamiisha heerka sare? Faa'iidooyin noocee ah ayey leedahay DTS si ay ugu qalanto shaqadan?
Xaqiijinta kuleylka, taasi waa, marka lagu sameynayo daaweynta kuleylka badeecada, hubi in heerkulka qeyb kasta oo ka mid ah qalabka jeermiska dhalmada uu yahay mid isku mid ah oo isdaba-joog ah inta lagu jiro habka heerkulka joogtada ah ee nadiifinta, ka dibna la xaqiijiyo in hannaanka nadiifinta lagu gaari karo amniga cuntada hagaajinta nidaamka si loo hagaajiyo tayada wax soo saarka isla markaana loo gaabiyo waqtiga hawsha. Dhanka cabitaanada la buuxiyey, kaliya nadiifinta iyo waxtarka firfircoonida leh ayaa baabi'in karta ama dili karta enzymes-yada iyo sheybaarayaasha ku jira cabitaanka laftiisa, waxayna hubin kartaa in badeecaduhu ay buuxiyaan shuruudaha ma dhalaysnimada ganacsiga. Sidaa darteed, xaqiijinta kuleylka waa mid ka mid ah qodobbada ugu muhiimsan ee lagu hubinayo nabadgelyada wax soo saarka, waana mid ka mid ah shuruudaha muhiimka ah ee ay u baahan tahay FDA-da Mareykanka ee soo saarayaasha cuntada iyo cabitaanka. Si kastaba ha noqotee, ma jiro hal shay oo isku mid ah oo lagu tijaabiyo xaqiijinta kuleylka ee qalabka jeermiska dhalista ee gudaha iyo dibedda, laakiin shuruudaha Nestlé waa kuwo aad u adag. Kaliya soo saarayaasha qalabka ee leh tayo aad u fiican, waxqabad la isku halleyn karo iyo nidaamka codka ayaa lagu dari karaa liistadooda alaab-qeybiyeyaasha. Tani sidoo kale waxay aasaas u tahay DTS inay ku noolaato, horumarto oo horumar gaarto.
DTS waxay leedahay xirfadle, dhalinyaro iyo firfircooni kooxda R&D, "qalab heer sare ah, saxan, heer sare ah" oo ah qalabka wax lagu farsameeyo, waxay raadineysaa isbadal sahaminta, waxay ku cusubtahay isbedelka. Waxaan aaminsanahay in DTS ay sii fogaan doonto oo ay abuuri doonto nolol wanaagsan.
Waqtiga boostada: Jul-30-2020